🥇 ▷ Kani waa nooca midabka baabuurta ee ugu iibka badan adduunka ✅
Kani waa nooca midabka baabuurta ee ugu iibka badan adduunka
Midabka baabuurta ugu caansan adduunka waa, mar labaad, wadarta dhammaan: caddaan! Sababtoo ah sanadkii la soo dhaafay, 39% gawaarida soo saare adduunka oo dhan ayaa lagu xushay midabkan, sida lagu sheegay warbixinta BASF Report Report 2019 ee loogu talagalay soosaarayaasha qalabka asalka ah ee qaybta gawaarida.
Marka micno malahan meeshaad aado, macno malahan inaad safarto wadooyinka Mareykanka ama Jarmalka Autobahn ama aad wadada aado magaalada: waxaad arki doontaa waxbadan gawaarida cad Marka loo eego codkastoo kale… Xaqiiqdii, markaan qoraayay waxaan fiiriyey inaan arko baarkinka hortiisa dariishadayda horteeda 8 8 ka mid ah 25 gawaarida ayaa lagu rinjiyeeyay midabkani. Midab kale oo sidaa u badan ma soo celiyo.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo yar yar oo halkan laga sameeyo. Hagaag, waa run in caddaanku yahay midabka la doorbido gawaarida, laakiin waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya gobollada. Tusaale ahaan, inta gobolka Aasiya Pacific ka mid ah laba baabuur ay caddaan tahay, Waqooyiga Ameerika iyo Yurub, Bariga Dhexe iyo Afrika waa saddexdiiba mid. Ku noqo tusaalahayga… Si adag u adke, ma u maleynaysaa?
Gawaarida madow ma qaataan dhumuc ka badan baabuurta cad?
Laakiin waa inaanan iloobin in aan halkan kaga hadlayno midabada baabuurka ee ugu jecel sanadka 2019. Haddii caddaanku ahaa protagonist 39%, madow, cawlan iyo qalin waxa lagu daray 39% kale; run ahaantii, waa kuwa ku xiga liiska kuwa ugu caansan, gaar ahaan SUV-yada.
22% kale ayaa loo qaybiyaa sida soo socota: 9% gawaarida sanadka 2019 waxay ahaayeen buluug halka 7% ay casaan ahaayeen. Brown iyo beige sidoo kale waxay caan ku yihiin miiska waxayna dhammaystirayaan miiska, gaar ahaan Yurub, Bariga Dhexe iyo Afrika. Laakiin aan si dhow u eegno Yurub…
Halkan, Xaruntayaga Hore, mid ka mid ah afarta gawaarida midabada ayaa leh chromatic midab: buluug wuxuu matalaa 11% halka 160 nooc oo kala duwan uu sidoo kale yahay hogaamiyaha kala duwanaanta iyo beige wuxuu soo baxayaa 2%. Adiguna, midabkee ayaad dooran lahayd?